Waa maxay noocyada daruuraha iyo astaamahoodu | Saadaasha Shabakadda
Cirka fiirinta iyo daruuraha oo la arko ayaa ugu badan. Daruuraha ma aha oo kaliya tilmaam roob iyo duufaanno, laakiin waxay na siin karaan macluumaad ku saabsan saadaasha hawada. Way kala duwan yihiin noocyada daruuraha samada dhexdeeda mid walbana wuxuu leeyahay astaamo iyo xaalado tababar oo kala duwan. Maqaalkan waxaan ku baran doonnaa noocyada kala duwan ee daruuraha, macnahooda iyo sababta ay u sameysmayaan.
Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato noocyada daruuraha? Akhriska sii wad wax walbana waad ogaan doontaa.
1 Sidee daruuro u samaysmaan
2 Daruuro sare
3 Daruuraha dhexdhexaadka ah
3.2 Stratus Sare
4 Daruuro hooseeya
4.2 Cudurka 'Stratocumulus'
5 Daruuraha horumarka toosan
5.1 Daruuraha cumulus
Sidee daruuro u samaysmaan
Kahor inta aynaan bilaabin sharraxaadda noocyada daruuraha waa inaan sharxnaa sida ay u samaysan yihiin. Si ay daruuro u jiraan cirka, waa inay jiraan qaboojin hawadu leedahay. “Loop” wuxuu ka bilaabmaa Qorraxda. Marka falaadhaha qorraxdu kululeeyaan dhulka korkiisa, sidoo kale waxay kululeeyaan hareeraha. Hawada kuleylka badan waxay noqotaa mid cufan, sidaa darteed waxay u egtahay inay kacdo oo lagu beddelo qabow, hawo cufan. Markaad sare u kacdo, heerkulka kuleylka ee deegaanka ayaa sababa heerkulka inuu hooseeyo. Sababtaas awgeed, hawadu way qaboojineysaa.
Markay gaarto lakabka qabow ee hawada, waxay isku uruurtaa uumiga biyaha. Uumiga biyahaani waa mid aan indhaha laga arki karin, mar haddii ay ka kooban tahay dhibco biyo ah iyo qurubyo baraf ah. Qaybaha ayaa aad u yar cabbir ahaan waxayna awoodaan in lagu hayo hawada xoogaa biyo ah.
Farqiga u dhexeeya qaabeynta noocyada kala duwan ee daruuraha waxaa sabab u ah heerkulka uumiga. Waxaa jira daruuro qaar oo sameeya heerkulkoodu sareeyo qaarna kuwa hoose. Heer-kulka qaab-dhismeedka ayaa hooseeya, "ka sii dhumuc weyn" daruurtuna waxay noqon doontaa. Waxa kale oo jira noocyo daruuro ah oo wax bixiya roobab iyo kuwa kale oo aan sidaas ahayn.
Haddii heerkulku aad u hooseeyo, daruurtu waxay sameysnaan doontaa kristantar baraf ah.
Cunsurka kale ee saameeya sameynta daruurtu waa dhaqdhaqaaqa hawada. Daruuraha la abuuray markii hawadu nasato waxay u muuqdaan inay ku soo baxaan lakabyo ama dabaqado. Dhinaca kale, kuwa ka samaysan inta udhaxeysa dabaylaha ama hawada leh mowjado taag daran waxay soo bandhigaan horumar toosan oo weyn. Badanaa kan dambe ayaa ah sababta roobka iyo duufaannada.
Waxaan ku kala sooci doonnaa noocyada daruuraha kala duwan iyadoo lagu saleynayo dhererka ay ku sameysmayaan.
Waa daruuro cad, hufan oo aan lahayn hooska gudaha. Waxay u muuqdaan sidii “dabo faras” oo caan ah. Iyagu waa uun daruuro ay sameeyeen kiristaalo baraf ah joogga ay ku sugan yihiin awgeed. Waxay u eg yihiin fiilooyin dhaadheer oo dhuuban oo leh qayb ka yar ama ka yar qaab joogto ah oo ah qaab xarriiqyo isbarbar socda.
Waxaa lagu arki karaa iyadoo indhaha qaawan oo cirka fiirinaya oo la arkayo sida ay umuuqato in cirku lagu rinjiyeeyay buraashyo. Haddii cirka oo dhan ay ku daboolan yihiin daruuraha cirrus, waxay u badan tahay in 24-ka saac ee soo socda isbeddel fiiqan oo cimilada la kulmi doono. Guud ahaan, badanaa waa isbeddellada hoos u dhaca heerkulka.
Daruurahaani waxay sameysmayaan lakab kudhowaad leh muuqaal dusha laalaabmay oo leh qaabab wareegsan sida inay yihiin jajab yar oo cudbi ah. Daruuruhu gebi ahaanba way cadyihiin iyagoon soo bandhigin wax hoos ah. Markay samadu u muuqato inay ku daboolan tahay daruuraha noocan ah, waxaa la sheegaa inay caajiso. Waxay la mid tahay tolidda idaha.
Badanaa waxay ka soo muuqdaan daruuraha cirrus iyo muujiyaan in cimiladu is beddeleyso illaa laba iyo toban saacadood. Markay soo muuqdaan, duufaanku badanaa wuu ka horreeyaa. Sida iska cad marwalba isku mid ma tilmaamayaan. Hadday sidaas tahay, saadaasha hawada iyo saadaasha hawadu aad bay u fududaan lahayd.
Waxay u muuqdaan jaleecada hore sida xijaab ay adag tahay in la kala saaro faahfaahinta. Mararka qaarkood geesaha waa la dareemi karaa maadaama ay dherer iyo ballaadhan yihiin. Si fudud ayaa loo aqoonsadaa maxaa yeelay waxay samaystaan ​​halo cirka hareeraheeda qorraxda iyo dayaxa labadaba. Waxay badanaa ku dhacaan daruuraha cirrus waxayna muujiyaan cimilada xun ama qaarkood foodda diiran.
Daruuraha dhexdhexaadka ah
Noocyada kala duwan ee daruuraha dhexe waxaan ka helnaa:
Waxay yihiin daruuro qaab dhexdhexaad ah u eg oo qaab-dhismeed aan caadi ahayn leh. Daruurahaani waxay ku sameeyaan jajabyo iyo isbedel ku dhaca qaybtooda hoose. Altocumulus tilmaam in cimilo xumo bilaabmayso ha ahaato roob ama duufaan.
Kuwani waa daruuro leh lakab khafiif ah iyo meelo cufan leh. Xaaladaha badankood qorraxda waxaa laga arki karaa daruuraha dusha. Muuqaalku wuxuu la mid yahay baro aan caadi ahayn. Waxay keenaan roob wanaagsan hoos u dhaca heerkulka.
Iyagu waa kuwa ugu dhow dusha sare. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Waxay u muuqdaan sida lakab madow oo caadi ah oo mugdi ah lehna heerar kala duwan oo madmadow. Sababtoo ah cufnaanta ayaa ku kala duwan daruuraha oo dhan. Waxay caan ku yihiin roobabka gu’ga iyo xagaaga. Waxaa sidoo kale laga heli karaa roobka qaab baraf.
Iyagu waa kuwa leh undulations la mid ah dhululubo dheereeya. Waxay sidoo kale leeyihiin xoogaa fiiq-fiiq ah oo ku jira midabbo kala duwan oo cawl ah. Waa dhif iyo naadir inay roob keenaan.
Muuqaalku waa mid cirka isku shareertay iyadoo aan la arki karin qaabdhismeedka si wanaagsan loo qeexay. Waxay leedahay xoogaa gogol-fuulo ah oo heerarkoodu kala duwan yahay. Inta lagu jiro bilaha qabowga waxay awoodaan inay adkeystaan ​​maalinta oo dhan, iyagoo siinaya muuqaal muuqaal muuqaal mugdi leh. Markay guga timaado waxay soo baxaan subaxa hore waxayna kala yaacaan maalinta. Waxay muujineysaa cimilo wanaagsan.
Daruuraha horumarka toosan
Kuwani waa daruuraha soo bandhiga darajooyin baaxad weyn iyo roobab.
Waxay leeyihiin muuqaal cufan iyo hooska aad u calaamadeysan, illaa laga gaaro qorraxda oo laga xirto. Waa daruuro cirro leh. Saldhigiisu waa mid jiif ah, laakiin qaybtiisa sare waxay leedahay soo bixitaanno waaweyn. Daruuraha cumulus waxay u dhigmaan cimilada wanaagsan markay jirto qoyaan yar oo jawiga ku yar iyo dhaqdhaqaaq hawo yar oo toosan. Waxay awood u leeyihiin inay keenaan roobab iyo duufaanno.
Iyagu waa daruuraha ugu waaweyn uguna ballaadhan ee u muuqda oo leh horumar toosan oo weyn. Midabkoodu waa cawl waxayna gebi ahaanba daboolaan qorraxda. Kuwani waa kuwa caadiga ah ee ku dhaca duufaanta oo xitaa soo saarta roob dhagaxyaalaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto sida loo ogaado daruuraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Noocyada daruuraha
Wanaagsan, qeybta daruuraha hoose sax ma ahan, waxaa jira seddex (laga bilaabo aan waxyeello lahayn oo khatar ah) marka hore waxaa jira cumulus oo ah daruur yar oo cad, ka dibna waxaa jira cumulonimbus (sawirka ugu horeeya) oo midabkiisu cadyahay korka sare iyo cirro hoose, waxay tilmaamayaan roob iyo duufaannada, aad bay khatar u yihiin dhagaxyada barafka waaweyn ee gudaha ku jira. Ugu dambeyntiina torrecumulus (sawirka ugu dambeeya) ayaa ah midka ugu halista badan leh dabeylo badan oo kor u kacaya kuna soo degaya.
Miyaad seegtay ceeryaamo iyo duufaanno?
Jawaab Ricardo Ruiz
Waxaan saxaa, faallooyinkeygii hore waxaan ula jeedaa daruuraha taagan, kuwani waxay salka ku hayaan qeybta hoose waxayna u gudbaan qeybta dhexe. Daruuraha kumbuyuutarku waa uun qayb hoose oo meesha aad dhahdo daruuro hoose waa isku dhafka daruuraha hoose iyo kuwa dhexe. Waxaan rajeynayaa inaan caawiyey
Waad ku mahadsan tahay macluumaadkan cajiibka ah waxay iga caawisay shaqadayda wax ku oolka ah 😅😅 sidoo kale waxaan ku mahadinayaa macluumaadkan inuu yahay mid aad muhiim u ah oo la fahmi karo xitaa ereyo adag
Ku jawaab NOA
Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay inay wadaagaan macluumaadkan maadama ay bixinayaan mowduucyo wadahadal waqtiga lamaanaha 😂😂
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waa wax aad u wanaagsan, wax badan ayeyna i caawisay !!! 😁😁